सुवास नेम्वाङलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने ओलीको तयारी, ईश्वर पोखरेल तनावमा ! | Dainik News Nepal
सुवास नेम्वाङलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने ओलीको तयारी, ईश्वर पोखरेल तनावमा !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को आसन्न १०औं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा सर्वसम्मत नहुने भएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदाधिकारीमा आकांक्षीहरु धेरै भएपछि सबै पदमा चुनाव गराउने निधो गरेका छन् । यसपटक एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेको छ । यसको लागि वर्तमान महासचिव ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ दौडमा छन् ।
ईश्वर पोखरेलनेकपा एमाले १० औं महाधिवेशनसुवास नेम्वाङ